ट्रायल फेल भएर हैरान त हुनुहुन्न? अपनाउनुस् यस्तो विधि: • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
ट्रायल फेल भएर हैरान त हुनुहुन्न? अपनाउनुस् यस्तो विधि:
काठमाडौं । उपत्यकाका सबैजसो यातायात कार्यालयमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ट्रायल दिनेहरुको लाइन लाग्ने गरेको छ । घण्टौं लाइनमा बसेर ट्रायल परीक्षाका लागि फर्म भरेकाहरु सानो गल्तीका कारण ट्रायलमा फेल हुँदै आएका छन् । मोटरसाइकल कुदाउन जानेर मात्रै हुँदैन् यसका लागि साहस, संयम र पर्याप्त होसियारी र प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ ।
ट्रायल पास गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम तरिका के के हुन्, कसरी ट्रायल पास गर्न सकिन्छ, त्यसका कित स्टेपहरु छन्, कुन कुन टेक्निकले सजिलै ट्रायल पास गरेर हातमा लाइसेन्स आउँछ भन्ने हरेक सिकारुको चाहना हुन्छ ।
ट्रायलमा सवारी चलाउनु सुरु गर्नुअघि हेल्मेट लगाउने र फित्ता बान्न विर्सनुहुँदैन । त्यस्तै लुकिङ ग्लास मिलेर नमिलेको हेर्ने र साइड लाइट पनि बल्नेर नबल्ने परीक्षण गर्नुपर्छ ।
– ट्रायलमा सबैभन्दा पहिला अंग्रेजी अंकको एटमा प्रवेश गर्दा जतिसक्दो कम स्पिडमा अगाडि बढाउनुपर्छ । एटको बाहिरी घेरालाइ अगाडिको चक्काले च्यापेर विस्तारै संकेत अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । एट पूरा गरिसकेपछि सोही दिशाबाट आधा राउन्डमा एस बनाएर बाहिर निस्कनुपर्नेहुन्छ । यसरी एटबाट निस्केपछि जेब्राक्रसिङ पुग्नुअगावै ट्राफिक लाइट हेर्न विर्सनु हुदैन ।
– ट्राफिक लाइट पहँलो या रातो बलेको छ भने जेब्राक्रसिङ लाइन नछोइकन रोकर बस्नुपर्छ । त्यस्तै, ग्रिन लाइट बल्दा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
-जेब्राक्रसिङबाट अगाडि बढ्पछि साँघुरो फल्याकबाट जानुपर्छ । यो क्रममा फल्याकको मध्यभागमा पुगेपछि बाँया साइडको साइडलाइट बाल्नुपर्छ । त्यसपछि यू टर्नमा विस्तारै बायाँ साइड घुमेर उकालो उक्लिँदा स्टप लेखिएको स्थानमा दुईवटा धर्काइलाइ नछोइकन बीचमा रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
– उकालोमा रोकेर अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला साइड लाइट अफ गर्न विर्सनु हुँदैन । त्यसपछि ट्राफिकको इसारा पाएपछि पछाडि नहटाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ ।
फेरि अरोलामा अगाडिको एउटा धर्कोलाइ नछोइकन र चक्का नघ्रिस्याइ रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि फेरि ट्राफिकको इसाराअनुसार उबडखाबडको बाटोबाट अगाडि बढ्नपर्छ । यो क्रममा ह्याण्डललाइ बलियो गरी समाएर थोरै एक्सिलेटर लिँदै पाइपको बाटो पार गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुइपांग्रेको स्टार्ट अफ गर्ने या न्युट्रलमा राख्नुपर्छ ।
– सवारी स्टार्ट गरेदेखि अन्तिममा नरोकसम्म ह्यान्डलबाट दुईवटै हात हटाउनु हुँदैन । यति चरण पूरा गरेपछि सवारीचालक अनुमति पत्र लिन योग्य भइन्छ ।